बल्दैनन शहरकै सौर्यबत्ती : मर्मतको जिम्मेवारी कसको ? – esetokhari.com
बल्दैनन शहरकै सौर्यबत्ती : मर्मतको जिम्मेवारी कसको ?
जवाफविहीन जनप्रतिनिधी, उपमहानगरसँग छैन एकिन रेकर्ड, बर्षेनी विनियोजित लाखौं लगानी वालुवामा पानी
२०७८ श्रावण १८, सोमबार १२:०४
नेपालगन्ज : बाँकेको नेपालगन्ज र आसपासमा जडान गरिएका अधिकांश सौर्यबत्ती बल्न छोडेका छन् । सौर्यबत्ती जडान गरिएको केही महिनामात्र बलेर विस्तारै अधिकांश सौर्यबत्तीहरू बल्न छोडेका हुन् ।
एक बर्ष नबित्दै रातको समयमा बत्ति बल्न छोडेपछि त्यसले सडक दुर्घटनाको झनै जोखिम निम्त्याएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । ६ महिनादेखि राम्ररी बलेको छैन ।
तर, बत्तिको मर्मतसंभार गर्न सरोकारवालाले चासो नदेखाएको नागरिक बताउँछन । उपमहानगरपालिकाले हरेक बर्ष बजेट विनियोजन गर्छ तर मर्मत गरिएको देखिदैन । उक्त रकम वालुवामा पानी झै भएको छ । जसको लेखाजोखै छैन ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका भित्र सय भन्दा बढि सौर्यबत्ती जडान भएका छन् । तर, जडान भएका मध्ये अधिकांशबत्ती बल्दैनन् । बत्ती नहुँदा रातको समयमा नियमित आवातजावत गर्न समस्या हुनका साथै पटक–पटक सडक दुर्घटना भएको समेत भएको छ । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?
बत्ति जडान गरिएको छ महिना नबित्तै मिलिक–मिलिक चम्किने र केही ठाउँमा नबल्ने समस्या आएको स्मरण गर्दै जनप्रतिनिधिले यस विषयमा खासैचासो नदेखाएको स्थानीय बताउँछन ।
बत्तिले सडकमा एकनासले उज्यालो नदिएपछि त्यहाँ हिंडडुल गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ’– नेपालगन्ज– १८ का स्थानीय विशाल शाहीले भने ‘सोलार बत्ति जडान गरिएको दुई, तीन महिना मज्जाले बल्यो, तर त्यसपछि बिग्रिएर उज्यालो दिन सकेको छैन, त्यसैले चाँडो भन्दा चाँडो सौर्यबत्तिको मर्मत गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ ।’
सौर्यबत्तीमा आएको समस्याका कारणले नगरको सुरक्षामा समेत गम्भीर असर पर्न थालेको छ । उपमहानगरपालिकाको समन्वय र संसद कोषबाट नेपालगन्जमा सौर्यबत्ती जडान गरिएको थियो ।
यता नगरपालिकाले भने सौर्यबत्तीको एक बर्ष मात्र वारेन्टी हुने भएको हुनाले नगरका अधिकांश बत्ती विग्रिने गरेको दाबी गर्दैै आएको छ । तर, यसरी बिग्रेका बत्तीको मर्मत, सुधार तथा नयाँ जडानमा उपमहानगरपालिका अहिले पनि उदासीन छ ।
उप–महानगरपालिका भित्र विग्रिएको सडक बत्ती मर्मतका लागि २० लाख बजेट विनियोजन गरेको उपमेयर उमा थापा बताउँछिन । तर, कहिले यी बत्ती मर्मत हुन्छन यसको जवाफ उपमेयर मात्रै होइन मेयरसँग पनि छैन ।